Kubathandi bezithombe izinhlelo ezinhle kakhulu ku-Android | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe ze-Android
Ukusetshenziswa okuwusizo kakhulu kwefoni ye-Android amandla wokuthatha izithombe bese wabelana ngazo ngokusebenzisa noma yimaphi amanethiwekhi omphakathi lapho abangane bethu noma umndeni wethu ungababona khona manje. Ngaphandle kokukwazi ukuthatha izithombe ezinhle, okunye okuhle esinakho kumatheminali wethu we-Android ukuthi kungenzeka ukuwahlela ukuze sibanikeze lokho kuthinta okukhethekile okubenza bathole "ukuthandwa" okuningi ku-Facebook.
Sikulethela i- izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe ku-Android ngomhleli wesithombe onjengePixlr Express, inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi enjenge-Instagram noma iphepha lodonga elifana noMuzei phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene esizokukhombisa zona ngezansi ukukusiza ukuthi uthande izithombe ngisho nangaphezulu.
1 I-Pixlr Express
7 Iphephadonga Elibukhoma le-Muzei
Kimi kunjalo isicelo se-quintessential ukuhlela izithombe ku-Android, futhi ngeke ilahleke kunoma yimaphi amadivayisi onawo. Izimfanelo ezinhle zePixlr Express ziningi, kepha uma sithi iqembu elenza intuthuko yalo yi-Autodesk, iningi lenu lizoqonda isizathu sekhwalithi yalo engakholeki. I-Autodesk idale izinhlelo ezinhle kakhulu zokuklama njenge-AutoCad noma iMaya uqobo.
I-Pixlr Express ine- inani elikhulu lezinketho. Esigabeni sokuqala se- «Ukulungiswa» uzothola kusuka kumathuluzi afana nokulungisa, ukufiphaza, isitayela, isitshalo, ukushintshanisa, ukulungisa okuzenzakalelayo kwezithombe namehlo abomvu, kuzinketho zokulungisa ukungafani, amandla, incazelo noma umbala.
Ngemuva kwalokho ku- "Umphumela", uzoba nawo amashumi amaningi we izihlungi ezinhle ongazisebenzisa ezithombeni zakho ukuyinika ukubukeka okuhlukile. Izihlungi ze-Vintage, black and white noma zokudala ukusho ezimbalwa. Ngaphandle kokukwazi ukusebenzisa lezi zihlungi, futhi sinezimbalwa zokwengeza zonke izinhlobo zemiphumela efana nentuthu, isikhala noma iziqhumane.
Ukuqedela ukuhlela leso sithombe ofuna ukusisonta, une "Imingcele" enemiklamo eminingi ehlukene, izinhlobonhlobo ezibalulekile zamafonti namalebula anezithombe zokwenza ngisho namakholaji.
I-Snapseed itholwe ngonyaka odlule yi-Google futhi singasho enezihlungi ezinhle kakhulu ongazithola esicelweni esinjalo. Ikhwalithi eliyigcinayo iyenza incintisane ngqo nePixlr Express, ngakho-ke uma umuntu ethanda ukuphinda enze izithombe, into ejwayelekile kakhulu ukuthi unezinhlelo ezimbili ezifakiwe kwi-smartphone yakho.
I-Snapseed inezinketho eziningi uPixlr anazo kepha igxile kakhulu ekusebenziseni izihlungi zayo ezimangalisayo. Amathuluzi afana nokulungiswa okuzenzakalelayo, ukulungisa okukhethiwe, lungisa isithombe, ukushintshanisa noma ukusika phakathi kwezinto eziyisisekelo. Ngemuva kwalokho singagxumela ezihlungi ezahlukahlukene uhlelo lokusebenza olunazo, eziningi futhi ezinekhwalithi engalingani.
Izihlungi zevintage, idrama, i-HDR, i-Grunge Tilt-Shift noma emnyama nomhlophe, yilokho ozokuthola ku-Snapseed, uqedele ukuthayipha kabusha izithombe ngenketho yokwengeza ozimele bokuphothula leso sithombe ofuna ukumangala ngaso kumlingani wakho noma kubangani bakho.
Uma nganoma yisiphi isizathu ufuna ukuzama esinye isicelo sokuthwebula kabusha isithombe, kukhona okunye lokho akufushane neze uma kuqhathaniswa kulawa amabili ashiwo ngaphambili. I-PicsArt isihleli sezithombe samahhala njengePixlr ne-Snapseed, futhi inezinketho eziningi namathuluzi afana nezihlungi, ama-collages, amafreyimu, imingcele, amalebula, imiphumela yombhalo, isiqeshana sokunquma, ukunqampula, ukujikeleza noma ukulungiswa kombala.
Ngaphandle kwamathuluzi futhi inezihlungi ongazisebenzisa ezithombeni zakho naku umhleli wekholaji ukudala izithombe ezinjalo ngamagridi wezithombe noma ukwazi ukuyisebenzisa ngokukhululekile ukubeka izithombe ngemuva.
Sus okulandwayo okungaphezu kwezigidi ezingama-100 vumela njengohlelo lokuthwebula lokuthakazelisa lwamadivayisi wakho weselula.
La izithombe zenethiwekhi yokuxhumana nabantu ngobuciko yi-Instagram. Futhi ngohlobo olusha lwe-Android olwethulwe ezinsukwini ezimbili ezedlule oluvuselela ngokuphelele isikhombimsebenzisi somsebenzisi ukwenza ukuphequlula uhlelo lokusebenza kujabulise kakhulu.
Labo abathanda ukuthatha izithombe bazokwazi nge-Instagram, ukunikela ithuba lokulayisha izithombe zethu bese wabelana ngayo nomndeni nabangane, noma ubenazo ngaphambi komhlaba ukuze bakwazi ukuzijabulela futhi baphawule ngazo uma sithathe esinye sezithombe zonyaka.
Futhi uma ufuna ukujabulela izithombe ezinhle kakhulu, i-500px ingesinye sezicelo ezinhle kakhulu ongazifaka ku-Android yakho. I-social network yokubamba iqhaza emphakathini omkhulu onayo nokuthi kuzokuvumela ukuthi uxhumane nalabo bathwebuli zithombe ukuthi uzithanda kakhulu izithombe zakhe.
I-500px ingenye yalezo zinhlelo zokusebenza kubalulekile kubathandi bezithombe.
Ngokungafani neyangaphambilini, iDayframe inikeza ithuba lokuthi vula i-smartphone noma ithebhulethi yakho ibe uhlaka lwesithombe sangempela. I-Dayframe isebenza ngezinsizakalo zezithombe ezifana ne-Facebook, Instagram, Tumblr, Google +, Dropbox, Flickr ne-500PX.
Ithebhulethi yakho izoba ifreyimu yesithombe lapho ungenza khona isethulo esingaphazamiseki sezithombe zakho kanye nalawo wezinsizakalo ezishiwo.
Iphephadonga Elibukhoma le-Muzei
I-Muzei Live Wallpaper izoyinakekela nikeza ukubukeka okuhlukile kudeskithophu yethebhulethi noma ifoni yakho. Ngezandiso eziningi kufanele ifake kusuka ku-Google Play Isitolo njenge-500px, Flickr, Tumblr noma i-APOD ukuze ibe nezithombe ezinhle kakhulu ze-NASA zosuku. Kusuka lapha ungaya kwizandiso ezi-8 ezinhle kakhulu ekaMuzei.
UMuzei ube nathi isikhashana kodwa usevele uyaqala isithombe sangemuva esihle kakhulu sabathandi bezithombe ku-Android.
Ukuqeda, bengingakwazi ukubeka eceleni kusho ukuthini isibukeli sesithombe esihle ku-Android. Sinegalari yethu yakwaGoogle njengokujwayelekile, kepha i-Quickpic ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ongazithola ku-Google Play Isitolo.
Ukusetshenziswa kwesisindo esincane kuma-megabyte, okusebenza ngokumangalisayo futhi kunamathuluzi ajwayelekile okuzungeza, aqambe kabusha, noma asethwe njengedeskithophu efonini yethu. Umbukeli wesithombe omuhle okungafanele alahleke kuhlu lwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe futhi ezisizakala ngokufakwa enguqulweni yakamuva Imodi yokuntywila ye-Android 4.4 KitKat.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe ze-Android
Imidlalo yamahhala yamahhala
Ingabe umphumela we-3D uyingozi ngempela emehlweni?